Budhcada Abaabulan ee Jigijga oo weeraray Ugaaska beesha Maalin Guur +sawiro. | ogaden24
Budhcada Abaabulan ee Jigijga oo weeraray Ugaaska beesha Maalin Guur +sawiro.
Oct 7, 2018 - Aragtiyood
Kooxda budh-cada Abaabulan ah ee magaalada Jigjiga kadilaacday ayaa weerar Qorshaysan kuqaaday Hoyga uu magalada Jigjiga kadagan yahay Ugaaska Guud ee beesha Maalin Guur Ugaas Maxamed Fowsi Ugaas Aadan Xadiis.
Weerarka Kooxda budh cada ahi kuqaaday Guriga Ugaaska ayaa waxaa kadhashay Khasaare Lixaad leh oo isugu Jira dhaawac iyo bur bur Hantiyeed oo baaxad leh, waxaana Kooxda Budhcada ah u suuragashay inay Gudaha u Galaan Guriga Ugaaska taasi oo khasaaraha sii badisay.
Halkan Riix sawirada
Budhcada Guriga weerartay oo Tiradoodu ahayd 13-ayaa ku Hubaysanaa Baangado iyo Agabyo kale waxaana u suuragashay dadkii Guriga daganaa oo iska difaacay budhcada inay Gacanta kudhigaan mid kamida kooxdaasi budhcada ah weerarka Fulaynimada ah kuqaaday Guriga Ugaaska.
Budh-cadka Gacanta lagu dhigay ee ay Qabteen dadkii kusugnaa Guriga laweeraray ee Ugaaska ayaa lagu wareejiyay ciidamada Amaanka magaalada isaga oo aan waxba layeelin.
Ugaaska iyo waxgaradka kale ee beesha Maalin Guur ayaan iyagu kahadlin weerarka Fulaynimada ah ee lagu Qaaday Ugaaska, waxaana weerarkani uu Qayb kayahay weerarada Fulaynimada ah ee kooxda Dulmidiid ay kawadaan magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaaneedka Somaalida Ogadenia.